विचार / विश्लेषण मेरो बिहेमा रक्सीले टिल्ल मातेको नारायणगोपाल दाइ
Friday,9Dec, 2016 3:12 PM
(पहिलो नेपाली अभिनेतृ भुवन चन्दसँग उनको अभिनय अनुभव र जीवनबारे चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले संवाद गरी तयार गरेको सामग्री)
म बुबाको एक मात्र सन्तान । बुबा रेडियो नेपालमा काम गर्नुहुन्थ्यो । म सानैदेखि स्टेज आर्टिस्ट थिएँ । मैले बालकृष्ण समको अन्धबेग भन्ने नाटकमा पहिलो रोल गरेकी थिएँ । सिंहदरबार भित्र एउटा हल थियो, त्यही हलमा देखाइएको थियो त्यो नाटक । मैले त्यसमा छोरीको भूमिका निभाएकी थिएँ । मलाई अलि अलि याद छ– गोपीनाथ अर्याल हिरो र शान्ति मास्के हिरोइनको रोलमा हुनुहुन्थ्यो । मामाले आमासँग भन्नुहुन्थ्यो–नाचगान गरेका छोरी बिक्दै बिक्दैनन् बाहिर नपठा । बाहिरका मान्छेले पनि यसै भन्थे तर, मैले नाचेको हेर्न आउँथे । आफ्ना छोरीलाई नाच्न दिन्थेनन् तर, हामीले नाचेको हेरेर मनोरञ्जन लिन छुटाउँदैनथे । मलाई त्यहाँसम्म बुबाले नै पुर्याउनु भएको हो । बुबा पनि कलाकार हुनुहुन्थ्यो । बुबाको साथीले स्टेजमा कलाकार चाहिएको छ भन्नु भएछ । अनि म स्टेजमा काम गर्न थालेँ । पढ्न पनि नभ्याउने गरी हामी स्टेज पर्फमेन्स गथ्यौं । साँच्चै भन्दा कलाकार एकदमै कम हुन्थे त्यो बेला । भीआइपीहरु मात्र आउँथ, हाम्रो पर्फमेन्स हेर्न । राजपरिवारका सबै आउँथे । खुब खुसी लाग्थ्यो । राजाको मुखबाट भुवनले धेरै राम्रो अभिनय गर्छे भन्ने सुनेको छु मैले । राजाको मुखबाट हाम्रो नाम सुन्नु इनाम पाउनु जस्तै हो । अहिले सम्झदा पनि मेरो जीवनको त्योजति खुसीको क्षण कुनै छैन । एउटा मेकअप पुछेर अर्को मेकप लगाउन हामीलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो । राजा देशभर जहाँ जहाँ जान्थे त्यहीँ त्यहीँ हाम्रो नाटक टोली पुग्थ्यो । देशमा मात्र होइन, त्यो बेला कम्युनिस्ट पार्टी भएका देशहरुमा हाम्रो सम्बन्ध थियो । चीन, भियतनाम, इरान, रसिया जस्ता देशमा हामी कार्यक्रम लिएर जान्थ्यौं । उताका कलाकार हामीकहाँ आउँथे । म कलाकार थिएँ, त्यसैले भित्रै ब्यस्त हुन्थेँ । बाहरिका मान्छेहरुसँग सम्पर्क हुन्थेन । देश भित्र भने कलाकारलाई हेर्ने मान्छेको नजर ठीक थिएन । त्यो फलानाकी छोरी नाच्छे अरे भनेर कुरा काट्थे । मामाहरुले नै आमालाई कति नराम्रोसँग भन्नुहुन्थ्यो । त्यसैले म मामाघर जान्नथेँ । मामाले भान्जीलाई नाच्च लगाएर बिगारे भन्नुहुथ्यो । नाचगान गरेका छोरी बिक्दै बिक्दैनन् बाहिर नपठा भन्नुहुथ्यो । बाहिरका मान्छेले पनि धेरै नराम्रो भन्थे तर, हेर्न चाहीँ आउँथे । उनीहरुका छोरा–छोरीलाई चाँही नाच्न दिन्थेनन् तर हामीले नाचेको हेरेर मनोरञ्जन लिन भने छुटाउँदैनथे । यदि नाच्नु नराम्रो थियो भने हेर्नु चाहिँ किन राम्रो भयो ? रोल गर्नुअघि म माला सिन्हा, बैजन्ती माला जस्ता हिरोइनको पर्दामा आएको अनुहार सम्झन्थेँ । तर, त्यो बेला केटा र केटी नजिक बस्ने, अंगालो मार्ने कुरा अपराध जस्तै हुन्थ्यो । बुबा रेडियो नेपालमा काम गर्ने भएकोले म रेडियो नेपाल गइरहन्थेँ । शिवशंकर दाइले मलाई छोरी भुवन बा ! भन्नुहुन्थ्यो । त्यसै मध्येको एक हुनुहुन्थ्यो इन्द्रलाल श्रेष्ठ दाइ पनि । उहाँ नेपालको सबैभन्दा ठूलो कलाकार हुनुहुन्थ्यो । २०२१ सालको कुरा थियो । एक दिन उहाँ कार लिएर हाम्रो घर अगाडि आउनु भयो । बुबा गायक भएकोले त्यो बेला राजाले उहाँलाई घरमै बोलाएर गाना सुन्थे । मैले सोचेँ– राजाबाट बोलावट भयो र बुबालाई लिन आउनु भएछ । तर उहाँ मलाई बोलाउन आउनु भएको रहेछ । भारतबाट फिल्म बनाउने मान्छे आएका रहेछन् । म लगायत अरु चार जनालाई उनीहरुसँग भेट गराइयो । र डाइरेक्टरले नै अनुहारमा मेकअप गरेर हेर्नुभयो । ल पछि खबर गर्छांै भन्नु भयो । मलाई के कहाँ कहिले त्यति ध्यान नै भएन । त्यसको झण्डै महिनादिन पछि ल फिल्ममा खेल्ने भनेर बोलाइयो । त्यो बेला एक मोहर तिरेर फिल्म हेर्न पाइन्थ्यो । त्यो रोल गर्नु अघि माला सिन्हा, बैजन्ती माला जस्ता हिरोइन भएको केही हिन्दी फिल्म हेरेकी थिएँ । अनि फिल्म खेल्ने भनेपछि त्यही पर्दामा देखिने गरेका मन पर्ने कलाकारहरु दिमागमा आयो । तर मैले के रोल खेल्ने ? के बोल्ने ? कुन लुगा लगाउनु पर्ने ? केही थाहा थिएन । त्यो बेला केटा र केटी नजिक बस्ने अंगालो मार्ने भन्ने कुरा अपराध जस्तै हुन्थ्यो । त्यस्तो त सोच्न पनि सकिंदैनथ्यो । मैले फिल्म खेल्ने बेलामा हिरो हिरोइन अंगालेमा बस्नै पर्छ भन्ने थिएन । त्यो बेला माया प्रीतिको कुरा देखाउनु परेमा दुइटा परेवा चुच्चा जोडेर बसेको या दुईटा फूल लर्किएको देखाइन्थ्यो ।
त्यो दिन मलाई उहाँहरुले लु बस गाडीमा भन्दै चोभार पुर्याउनु भयो । मलाई अहिले पनि याद छ– चोभारको त्यो ढुंङ्गा । त्यहाँ पुगेपछि भारतबाट आएका डाइरेक्टरले मलाई मखमली चोलो र छिटको साडी लगाउन लगाए । तारादेबी र शिवशंकर दाइले गाउनु भएको गीत थियो –गरौंला हामी सिर्जना । त्यो गीत सँगसँगै गाउन लगाइयो । ढुङामा यसो छोएर उभिन लगाए । उताबाट शिवशंकर दाइ आउनु भयो । उहाँलाई देखेर लजाउन भनियो । त्यो बेला मात्र थाहा भयो म त हिरोइन भएर खेल्दै रहेछु । हिरो चाहीँ शिवशंकर दाइ हुनुहुँदो रहेछ । त्यसरी म के को रोल गर्दैछु पनि भन्ने थाहा नपाई नपाई हिरोइन भइएछु । अहिले अरुले भन्दा तपाईं त पहिलो हिरोइन भन्दा लाग्छ– काम गर्दै गएपछि इतिहास आफैं लेखिदो रहेछ । पहिलो फिल्म राजा महेन्द्रले उद्घाटन गर्नु भएको थियो । त्यो बेला पनि एउटै टिकटको १५० रुपैयाँ तिरेर हेरेका थिए दर्शकले । तर, त्यो बेलाका दर्शक भने राज खान्दानका खान्छे मात्रै हुन्थे । जय नेपाल चलचित्र घरमा यो रिलिज भयो । नेपालीले हिन्दी चलचित्र मात्र हलमा गएर हेरिरहेको बेलामा नेपाली चलचित्र हेर्न पाए, धेरै नै मनपराए । अरुबेला कलाकारलाई गाली गर्नेले पनि रमाई रमाई नेपाली चलचित्र हेरे । नारायण गोपाल दाइले तिम्रो बिहे भोजमा रक्सी म बनाउँछु भन्नु भयो । उहाँले रक्सी बनाउँदै खाँदै गरेका तस्बिरहरु अहिले पनि छन् । नारायण दाइ टिल्ल थिए त्यो भोजमा । उनलाई यति मातेको मैले त्यही देखेकी हुँ ।
मैले फिल्म खेल्ने बेलामा हिरो हिरोइन अंगालेमा बस्नै पर्छ भन्ने थिएन । त्यो बेला माया प्रीतिको कुरा देखाउनु परेमा दुइटा परेवा चुच्चा जोडेर बसेको या दुईटा फूल लर्किएको देखाइन्थ्यो । त्यो बेलाको अभिनयमा ७० प्रतिशत भाव प्रस्तुत हुन्थ्यो । अहिलेका फिल्ममा ७० प्रतिशत डाइलग हुन्छन् । कथा हुन्थ्यो त्यो बेला । ठेट नेपाली भाषा प्रयोग हुन्थे । सबै परिवार सँगै बसेर हेर्न सकिन्थ्यो । तर अहिले फिल्म हेर्न मन लागे पनि सबै परिवार एकैठाउँ बसेर हेर्न सकिने खालका फिल्म छैनन् । म राम्री थिएँ होला सायद, त्यसमा पनि फिल्म खेलेको मान्छे । मलाई भेट्न आउने त कति हो कति । सेन्ट जेभियर्स कलेजका बिद्यार्थी एक कप चिया पिउछौं तपाईंसँग भनेर आउँथे । कति गरेर समय निकालेर भेट्थेँ । त्यो बेला म राष्ट्रिय नाचघरमा काम गर्थेँ । हामी यति ब्यस्त हुन्थौं कि कसैले नजर लगाउँदा उसको नजरमा नजर जुधाउने पुर्सद पनि थिएन । कसैले प्रपोज गरेको बुझ्ने पनि फुर्सद थिएन । एक दिन नाचघरमा बिदेशी दर्शकहरुलाई अग्रेजी ट्रान्सलेट गर्ने मान्छेको खाँचो भयो । हरिश चन्द, जो रेडियो नेपालमा अग्रेंजीमा समाचार भन्नुहुन्थ्यो । उहाँ अंग्रेजी ट्रान्सलेटरको रुपमा हामीकहाँ काम गर्न थाल्नु भयो । एक दिन उहाँले म तिमीलाई मन पराउँछु, तिमी पनि मलाई मन पराउँछौ ? भनेर सोध्नु भयो । सुदूर पश्चिमको केटो, यहाँ डेरा बसेर यति काम गरेको छ । दुःख गरेर बसेको हेर्दा पनि माया लाग्यो । मैले हस्, म हजुरको हुन तयार छु भनेँ । उसको घरमा त के भन्थे कुन्नी, तर उसले चाहीँ मलाई डेरामै भित्र्याएको हो । डेरामा भित्र्याएपछि चाहीँ भोज लगायौं । भोजमा रेडियो नेपालका सबैलाई बोलाएका थियौं । भोजमा राजनीतिकर्मी देखि कलाकार सबै आएका थिए । नारायण गोपाल दाइ मलाई धेरै मायाँ गर्ने । उनले तिम्रो बिहेमा रक्सी म बनाउँछु भनेर भन्नु भयो । नारायणगोपाल दाइले मेरो बिहे भोजमा रक्सी बनाउँदै खाँदै गरेका तस्बिरहरु अहिले पनि छन् । नारायण दाइ टिल्ल थिए त्यो भोजमा । उनलाई यति मातेको मैले त्यही देखेकी हुँ ।मसँगै मेरो परिवार डिपेन्ड थियो । मैले १५० रुपैयाँ तलब थाप्थँे । त्यतिले मेरो परिवार बस्ने डेरा भाडा तिरेर खाने जोहो हुन्थ्यो । चोभारको त्यो ढुंङ्गा । डाइरेक्टरले मलाई मखमली चोलो र छिटको साडी लगाउन लगाए । तारादेबी र शिवशंकर दाइले गाउनु भएको गीतमा मुख चलाउन लगाए । परबाट शिवशंकर दाइ आउँदा मलाई ढुंङ्गाको आडमा लजाएर बस्न भनियो । त्यो बेला मात्र थाहा भयो– म हिरोइन, शिवशंकर दाइ हिरो हुनुहुँदो रहेछ ।